Vafambisi vekufambisa vane tarisiro yekupora kwekufamba muna 2022
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vafambisi vekufambisa vane tarisiro yekupora kwekufamba muna 2022
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Zvinofadza kuona tarisiro yakadai kubva kuindasitiri yekufambisa yepasirese sezvo ichitaridzika kupora kubva mukukanganisa kweCovid-19.
Vana-kubva-pa-gumi vakuru vekufambisa nyanzvi vanofunga kuti 2022 mavhoriyamu ekuchengetera muindasitiri achaenderana kana kudarika mazinga a2019, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Vanosvika mazana manomwe nyanzvi dzepamusoro kubva pasirese dzakabatsira kuWTM Indasitiri Report uye yakaratidza tarisiro ye700, maererano kwete chete indasitiri yakakura asiwo bhizinesi ravo.
Pavakabvunzwa, 26% vane chivimbo chekuti kudhindwa kwemaindasitiri kwa2022 kuchafananidzwa ne2019, ne14% vachitarisira kuti 2022 ichapfuura gore rakajairwa risati ratanga COVID-19 kutanga kwa2020.
Pavakabvunzwa nezvekuita kwavo bhizinesi, nyanzvi dzaive netarisiro yakaenzana, ne28% vachitarisira kubhukidza kuenderana ne2019, ne16% vachitarisira kuwedzera.
Zvisinei, havasi vose vari kutarisira kupora muna 2022. Inenge hafu yemuenzaniso (48%) inofunga kuti mhizha ichawira pasi pe2019, ne11% isina chokwadi. Uye kune mamwe mabhizinesi ega ega, 2022 ichava nhamburiko, ne42% vachibvuma kuti kubhuka haafanire kufanana ne2019. Imwe 14% haina chokwadi chekuti 2022 ichabuda sei.
Simon Press, Exhibition Director, WTM London, akati: "Zvinofadza kuona tarisiro yakadaro kubva kuindasitiri yekufambisa yepasirese sezvo ichiita senge ichapora kubva mukukanganisa kweCovid-19. Indasitiri iyi inoungana svondo rino kuWTM London kuti vabvumirane zvibvumirano zvebhizinesi zvinogadzirisa ramangwana reindasitiri yekufamba uye yekushanya.